မလေးရှားမှ ပြန်လှည့်လာရသော ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီတို့ကို ပြန်လည်လက်ခံရန် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်ပယ်ချနေ။ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်အား နိုင်ငံတကာဖိအားပေး။ တက္ကနဖ်နှင့် အူခီယာမှ လှေစီးပြေးများ ဖြစ်ပုံရသူတို့ကို မြန်မာအနောက်မြောက်ဖျား တိုက်ပွဲများကြောင့် ထွက်ခွာသွားသူများအဖြစ်ဖော်ပြ – H2Oupdatenews
မလေးရှားမှ ပြန်လှည့်လာရသော ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီတို့ကို ပြန်လည်လက်ခံရန် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်ပယ်ချနေ။ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်အား နိုင်ငံတကာဖိအားပေး။ တက္ကနဖ်နှင့် အူခီယာမှ လှေစီးပြေးများ ဖြစ်ပုံရသူတို့ကို မြန်မာအနောက်မြောက်ဖျား တိုက်ပွဲများကြောင့် ထွက်ခွာသွားသူများအဖြစ်ဖော်ပြ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရက်စက်ဖိနှိပ်မှုခံ ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ ( မူရင်းရိုဟင်ဂျာဟုဖော်ပြ ) များသည် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် မရေမရာဖြစ်လျှက်ရှိပြီး ၎င်းတို့အား ကမ်းခြေသို့ ဆိုက်ကပ်ခွင့်ပြုရန် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတို့၏ တောင်းဆိုချက်ကို ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံက ငြင်းဆန်လျှက်ရှိသည်ဟု Duplomat က ယနေ့ရေးသားသည်။
ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများသည် မူလက မလေးရှားသို့သွားရန် ကြိုးစားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် Covid-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် မည်သည့်တစ်စိမ်းလှေကိုမဆို လက်မခံသည့် နိုင်ငံတို့၏ကန့်သတ်ချက်များက ၎င်းတို့အား ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်း မရေမရာအခြေအနေဖြင့် ချန်ထားရစ်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကဲ့သို့ ၎င်းတို့နှင့် အနီးဆုံးနိုင်ငံသည်ပင်လျှင် အလားတူ စွန့်ပစ်ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်သည်။
အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးငယ်များအပါအဝင် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ ၅၀၀ ခန့်သည် ငါးဖမ်းဘုတ် ၂-စီးဖြင့် ပင်လယ်ပြင်တွင် ရက်သတ္တပတ်များကြာအောင် မျောပါလျှက်ရှိပြီး အစာရေစာပြတ်လပ်လျှက် အရေးပေါ်ဆေးဝါးကုသမှုခံယူရန်လိုအပ်နေသည်။ အစာရေစာ လုံလုံလောက်လောက်မရှိသည့် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများအား ပင်လယ်ပြင်၌ စွန့်ပစ်ထားသည်ဆိုခြင်းမှာ လက်ခံနိုင်စရာ မရှိကြောင်း ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR က ပြောဆိုသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Abdul Momen အဗ္ဗဒူမိုမန်ကမူ အခြားနိုင်ငံများလည်း ကြည့်ရှု့ စောင့်ရှောက်ရန် တာဝန်ရှိသည်ကို ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်အနေဖြင့် တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း၊ နိုင်ငံအတွင်း၌ နိုင်ငံခြားသား သို့မဟုတ် ဒုက္ခသည်များအား နေရာထိုင်ခင်းပေးရန် နေရာမရှိတော့ကြောင်း၊ ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများအား နိုင်ငံအတွင်း ဝင်ခွင့်ပြုရန်ဆိုသည်ကို မိမိတို့ဆန့်ကျင်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။ ထို့မျှမက အဆိုပါဒုက္ခသည်များ ပြည့်နှက်နေသည့် ငါးဖမ်းဘုတ်များမည်သည့်နေရာ၌ရှိကြောင်း အချက်အလက် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန် တာဝန်ရှိသည်ကိုပင် ပယ်ချခြင်းဖြင့် ခေါင်းရှောင်လျှက်ရှိသည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်များက မြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ပြေးလာသည့် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများအား အကာအကွယ်ပေးသူအဖြစ် အကောင်းမြင်ခံခဲ့ရသူ ရှိတ်ဟာစီနာသည် တစ်ချိန်က သူကူညီခဲ့ဖူးသည့် ဒုက္ခသည်များအပေါ် ဆန့်ကျင်ပြောင်းပြန်ပြုနေသည်။ ရက်စက်ဖိနှိပ်မှုများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်သွားရန်မဖြစ်နိုင်သည့် ဒုက္ခသည်များအား ကူညီရန် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများ ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ ထို့အပြင် မလေးရှား- ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကဲ့သို့ အနီးအနား၌ တည်ရှိနေသော အခြားနိုင်ငံများသည်လည်း နိုင်ငံတကာဥပဒေအရ ဒုက္ခသည်များ သယ်ဆောင်လာသည့်လှေများကို ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန် တာဝန်ရှိသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကမ်းခြေသို့ ဆိုက်ကပ်ခွင့်ပြုရန် ငြင်းဆန်ခြင်းသည် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများ ပင်လယ်ပြင်တွင် တမင်သေစေရန် အတင်းအကြပ်ပြုရာရောက်သဖြင့် ကိုရိုနာကူးစက်ကပ်ရောဂါအား အကြောင်းပြဆင်ခြေပေး၍ မရပါ။ ၎င်းသည် လူမဆန်ရုံသာမကဘဲ နိုင်ငံတကာဥပဒေကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ချိုးဖောက်ရာရောက်နေသည်ဟု Diplomat က ရေးသားသည်။
ယခုဧပြီလ စောစောပိုင်းတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့က ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီလှေတစ်စီးအား ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် လွန်ခဲ့သော ၂-လခန့်က မလေးရှားနိုင်ငံမှ ပြန်လှည့်လာကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပြီး အများအားဖြင့် အသက် ၂၀ အောက် လူငယ်များပါဝင်သော ဒုက္ခသည် ၃၉၀ တို့မှာ အစာရေစာ ငတ်မွတ်လျှက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ကယ်ဆယ်ခြင်း မခံရမီ အသက်ဆုံးရှုံးရသော ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ ၁၀၀ ခန့်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်တွင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၌ ငါးဖမ်းဘုတ် ၂-စီးဖြင့် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ ၅၀၀ ကျော်တို့မှာ ရက်သတ္တပတ်များစွာ လိပ်ခဲတင်းလင်းနေပြီး ၎င်းတို့ထဲမှ မည်မျှသေဆုံးသွားသည်ကို ရှင်းလင်းစွာ မသိရသေးချေ။ ဒုက္ခသည် ၅၀၀ တို့ သေကြေပျက်စီးရတော့မည်ဖြစ်၍ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်အနေဖြင့် အတိတ်က မည်သို့-မည်ပုံ ကျေးဇူးပြုခဲ့ဖူးသည်ကို မေ့ဖျောက်ကာ ထိုလှေနှစ်စင်းကို ကမ်းခြေသို့ သယ်ဆောင်ရာတွင် မဆိုင်းမတွ ကူညီသင့်ကြောင်း သတင်း၌ ဆက်လက်ဖော်ပြသည်။
(( ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် သတင်းမီဒီယာသမားတို့သည် ပူလစ်ဇာနှင့် မက်ဆေးဆေးတန်းဝင်သူများ ဟုတ်ပုံမရချေ။
Dhaka Tribune April 15th, 2020. “ 382 Rohingyas return after failing to reach Malaysia by sea” အရ ဧပြီ ၁၅-ရက်နေ့ ကော့ခ်ဘဇား ဆိပ်ကမ်းတွင် ငါးဖမ်းဘုတ်တစ်စီးပေါ်မှ ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ ၃၈၂-ဦးကို ကယ်တင်ခဲ့ရာ ၎င်းတို့သည် တက္ကနဖ်နှင့် အူခီယာဒုက္ခသည်စခန်း၌ ခိုလှုံခဲ့သူများဖြစ်နေသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၂-လခန့်က မလေးရှားသို့ ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီး ပြန်လှည့်လာရသူများဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
သို့သော် Dhaka Tribune April 22nd, 2020. “Navy, Coast Guard preventing2boats carrying Rohingyas from entering Bangladesh” တွင်မူ ဧပြီ ၂၀-ရက်နေ့ ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ ၅၀၀ ခန့်လိုက်ပါလာသော ငါးဖမ်းဘုတ် ၂-စီးကို ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်ရေတပ်က မောင်းထုတ်လိုက်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ယခင် ရက်သတ္တပတ် လှေ ၁-စီးပါသူများမှာ တက္ကနဖ်နှင့် အူခီယာမှ လှေစီးပြေးများဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြသော်လည်း၊ ယခု လှေ ၂-စီးမှာ မြန်မာအနောက်မြောက်ဖျား တိုက်ပွဲများကြောင့် ထွက်ခွာခဲ့ကြသူများဖြစ်ဟန်တူကြောင်း ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် အာဏာပိုင်များက ပြောဆိုသည်။ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် ရေမတော်အား တပ်လှန့်ထားလိုက်ပြီး ရေပြင်ပိုင်နက်အတွင်း မည်သည့် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီလှေမျှ အဝင်မခံနိုင်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အဗ္ဗဒူမိုမန်က အခိုင်အမာ ပြောဆိုကြောင်း ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ။ သတင်းဘာသာပြန်သူ ))
((( The Diplomat ., April 26, 2020, “Bangladesh Must Protect the Rights of Rohingya Muslims Stranded at Sea. By Tasnim Nazeer .” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ် ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ အကြောင်းအရာတူအချက်အလက်များကိုဖော်ပြရာတွင် ကိုးကားချက်များမှာ ပေးထားပါ Links များအတိုင်းဖြစ်သည်။ )))
Previous Previous post: ” ဒီစစ်ပွဲမှာ ကျွန်မတို့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါပြီ ..” ၊ Covid- 19 ရောဂါအား အနိုင်ရလိုက်ပြီဖြစ် ကြောင်း နယူးဇီလန်ကြေညာ။ သို့သော် ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက် အမြင့်ဆုံးကန့်သတ်ချက် အဆင့် ၄-မှ ၃- သို့ လျှော့ချ
Next Next post: ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ရှိ- မရှိ အခမဲ့ စစ်ဆေးမှုခံယူရန် တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေသော ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်ပြည်သူများ။ ရောဂါပိုး ရှိ-မရှိ အရေအတွက်များများ-မြန်မြန်-အရည်အသွေးပြည့် စစ်ဆေး နိုင်ခြင်းသည် ပညာရှင်-ဆေးဝါကိရိယာနှင့် ငွေကြေးမပြည့်စုံသော ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက် အကောင်းဆုံး ခံစစ်ကြီးဖြစ်သည်။